TOP-25 amin'ireo olona mainty indrindra eran'izao tontolo izao
Araka ny voalazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, tamin'ny 2016, olona 650 tapitrisa no efa nahita fianarana. Ary tsy mahatsikaiky mihitsy izany. Mety hiteraka olana maro ny fahasalamana.
Nefa azo atao ny misakana ny fikarakarana ny tenanao sy ny sakafonao amin'ny fotoana, maro amin'ireo olona avy ao amin'ny lisitra ambany no mbola mahazo lanja ...
Ilay lehilahy matavy any Aostralia. Talohan'ny tsy maintsy nampidirina hopitaly dia nandanja 199,5 kg i André Nasr ary nihinana kalesina 12.000 isan'andro.
Te ho lasa vehivavy mavesatra indrindra eran-tany izy ary niezaka nitondra ny lanjany ho 450 kilao, saingy tsy tonga ny tanjona - izy dia "nijanona" teo amin'ny 270 kg. Saingy tsy namoy ny lohany i Donna. Namorona ny tranonkalany manokana izy ary ankehitriny dia manome $ 90,000 isan-taona amin'ny hoe ny rehetra dia te-hijery ny fomba fihinany an-tserasera.
Raha nandanjalanja 360 kilao ilay lehilahy, dia lavo izy ary tsy afaka nitsangana - Michael dia ampy. Tsy vitako ny niatrika ny asan'ny polisy izay nodimandry. Rehefa afaka kelikely, dia nahatratra 470 kilao i Edelman, ary avy eo dia maty tamin'ny pnemonia sy ny tsy fahampian-tsakafo.
Nandany 450 kg izy. Mba haka ilay lehilahy tao amin'ilay trano, dia naharitra adiny 6, nitaingina sy tady - dia nidina avy teo am-baravarankely i David. Maty tao amin'ny hopitaly i Hui vokatry ny tsy fahampian'ny fo sy ny voa.
Niatrika olana tamin'ny faha-54 taonany ilay lehilahy. Nahatratra 450 kg ny lanjany ary nametraka azy tao amin'ny fiara mpamonjy voina, nilaina ny gilasy iray. Tao amin'ny hopitaly i Silvanus dia nahavita namoy 130 kg, saingy tsy ela dia nihena ny lanjany. Ny antony mahatonga ny fahafatesany dia heverina ho diabetika.
Azo inoana fa nandanja 450 kilao izy, saingy raha ny marina dia tsy dia nandanja ny fahitany an'i Jose Luis. Raha vantany vao chef izy dia avy eo ny fahaketrahana sy ny alikaola dia nanao vazivazy ratsy taminy. Amin'ny fotoana iray, i Garza dia nandray ny tenany ary nilaza fa tsy te ho lasa olona sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao izy.
Terry mitentina 320 kg eo ho eo i Terry ary heverina ho iray amin'ireo vehivavy mainty indrindra eran-tany. Noho ny lanjany dia tsy afaka niala teo am-pandriana i Terry, ary nikarakara ny lay teo amin'ny soroky ny fianakaviany.
Andresy 440 kilao i Andres ary maty tamin'ny Andro Krismasy teo amin'ny faha 38 taonany avy amin'ny aretim-po iray. Nandritra ny fotoana kelikely dia izy no lehilahy mainty indrindra eran-tany.
Nandritra ny faha 44 taonany, Keith Martin dia nahatratra 450 kg ary noterena hiditra amin'ny fandidiana bariatric, izay manampy amin'ny fanesorana fatim-be loatra. Nahomby ilay fandidiana saingy indrisy anefa, nisy lehilahy iray voan'ny pnemonia ary maty 8 volana monja taorian'izay.
Ankoatra ny nahafatesany niaraka tamin'ny lanjany 450 kg, dia notandindomin-doza koa i Mayra. Voampanga ho namono zanak'anaka izy. Saingy taty aoriana dia hita fa tsy afaka nianjera i Rosales, fa tsy zaza - vehivavy tsy afaka nivoaka avy ao am-pandriana. Rehefa hita mazava fa tsy manantsiny ny vehivavy mainty indrindra eran-tany, dia nandeha tany amin'ny anabaviny ny polisy, izay lasa mpamono olona. Tsapany fa tsy nisy olona nanaraka ny zanak'anabaviny, i Myra dia nanangona ny sitrapony ho totohondry, nandalo asa maro ary nanomboka nitandrina 91 (!!!) kg.
Nihoatra ny 2.3 metatra ny lanjany, efa ho 465 kilao. Tsy nijanona ny sary Darden - niaina tamin'ny taona 1799 hatramin'ny 1857, fa raha mino kosa ny tsaho, dia niaina fiainana mavitrika ilay lehilahy. Maty ny Mills, izay heverina fa voafandriky ny hoditra eo amin'ny tendany.
Ny lanjany lehibe indrindra dia 500 kilao. Nandritra ny tantara manontolo, dia nihena ny lanjany Michael ary nahatratra ny 2000 kg. Hebranko dia maty noho ny fiterahana, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hepatika.
Ho fahatsiarovana an'i Mike Parteleno
Ny harenan'ny olona dia tsy mena noho ny haben'ny kaontiny ao amin'ny banky sy amin'ny entam-barotra hafa, fa ny isan'ireo namana, fianakaviana, ary ny fiainana ary ny fo izay ahafahana mahazo izany.
Nahatratra 460 kg teo ho eo izy, nanaraka ny sakafo Bahamiana an'i Dick Gregory ary tia nandray anjara tamin'ny fifaninanana olona matavy.
Manodidina ny lehilahy iray lanjan'ny 470 kilao, no nandrakitra horonantsary fanadihadiana Half ton dad. Raha mbola tanora izy dia atleta, saingy nisotro ronono izy ary nanomboka nahazo lanja. Araka ny tantaran'ireo nanatri-maso, nihinana kaloria 30 000 isan'andro izy.
Ny zanaka lahimatoan'izao tontolo izao, Jambique, dia efa 4 taona raha heveriny fa 56 kilao. Taorian'izany, nitombo ny volany, ary tamin'ny 9 taonany dia nanomboka nitombo 184 kilao i Hatokhov.
Noho ny aretim-pirahalahiana nentim-paharazana, dia nitombo haingana ny lanjany ary lasa olona matavy teo amin'ny planeta. Tamin'ny 1958, 32 taona izy, nandanja 472 kg i Robert ary maty noho ny tsy fahombiazan'ny fo.
Izy no olona matavy manana lanjany 444 kg. Ny olana tamin'i Paul dia nanomboka taorian'ny nahafatesan'ny rainy sy ny reniny. Saingy taorian'ny nandidiana ny vavony, dia nanomboka navesatra i Mason.
Mahatratra 498 kg izy, ary azo antoka fa heverina ho iray amin'ireo vehivavy matanjaka indrindra eran-tany. Ny tombony mavesatra dia vokatry ny aretin'ny tiroida sy ny tsy fahampian-tsakafo. Eman dia maty nandritra ny 37 taona ny tsy fahombiazan'ny fo sy ny tsy fahombiazan'ny voa.
Nankany amin'ny hopitaly izy efa ho antsasak'adona. Nanampy an'i Patrick handefa lanja kely ilay fandidiana, saingy tsy namaha ny olan'ny Duel rehetra i Duel.
Ny lanjany lehibe indrindra dia 544 kg. Maty tamin'ny sepsis i Robert tamin'ny 43 taona.
Ilay olona matavy dia nandanja 550 kilao. Tamin'ny fotoana niainany, tamin'ny 46 taona, ny lanjan'i Walter dia 510 kg.
Tamin'ny 1993, rehefa 34 taona izy, dia nandanja 539 kg i Carol. Nentina tany amin'ny hopitaly izy noho ny fanampian'ny afo brigade. Nandritra ny 9 volana dia tsy nihetsika i Jager. Tao amin'ny hopitaly, nidina 226 kg i Carol, saingy mbola tsy ara-dalàna ny lanjany.
Talohan'ny nahafatesany teo amin'ny faha-48 taonany dia nandanja 557 kg i Manuel. Tsy niakatra 6 taona teo am-pandriana i Uribe. Ny antony nahafatesan'ny olona dia ny tsy fahampian'ny fo sy ny aretina.
Lehilahy Arabo Saodiana iray no nandanja 610 kg tamin'ny zatovo. Raha nianatra momba ny olany izy dia niditra an-tsehatra ny mpanjaka, izay nanery an'i Khalid ho tonga hopitaly.
Ao anatin'ny bokin'i Guinness Records izy io no lehilahy mavesatra indrindra. Tamin'ny 1978, dia nandanja 635 kilao i John. Mba hamerenana azy any amin'ny toeram-pitsaboana, dia olona 13 no noraisina. Nahomby izy tamin'ny farany taorian'ny sakafo matsiro, ary tamin'ny farany dia maty i Minnow tamin'ny lanja 361 kg.
Mpankafy fanatanjahantena 21
Fehezanteny 14 mampikorontana ny friar
12 Dingana mankany amin'ny endrika tianao
Fitetezam-behivavy ho an'ny jeans
Fiaramanidina sy aerobic
Sakafo mihinana kisoa
Fanavaozana ny Khrushchev roa kambana
Ny fihinan'i Dickul - sakafo isan'andro
Hoatran'ny haingana ny mitondra kiraro?
Ahoana ny fihetsiky ny tsy fahamendrehana?
Avy amin'ny tabilao Ranitidine?
Amin'ny inona ny manao akanjo mainty?
Fehezam-boninkazo amin'ny tananao
Georgina Rodriguez dia tamin'ny volana fahadimy tamin'ny fitondrana vohoka
25 sarin'ny ankizy sy alika, aorian'izany dia tianao ny biby an-trano
Ahoana ny fomba hanasana lamba amin'ny akanjo?